सक्छौ भने यो देशको ८०% अहिन्दु मुलबासीहरुलाई जेल हालेर पालन पोषण गर । किनकी हामी सबै गाई गोरु खाने नै छौ । नेत्री बिमला पुन - MONGOL KHABAR
सक्छौ भने यो देशको ८०% अहिन्दु मुलबासीहरुलाई जेल हालेर पालन पोषण गर । किनकी हामी सबै गाई गोरु खाने नै छौ । नेत्री बिमला पुन
दाङ । एउटा बाहुनले बलात्कार हत्या हिंसा र आतंक मच्चाउदा बर्षौ सम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्दैन र त्यस लाई कहिले पनि बाहिर ल्याउने प्रयास गरिदैन । तर एक मुलावासी मंगोलले आफ्नो धर्मले दिए अनुसार गाई गोरु काटेर खादा जहाँ पायो त्यही बाट गिरफ्तार ? क्या मज्जाको सरकार छ, नेपालमा ।
सरकार धन्य हौ तिमिहरु किनकी यो देश तिमीहरुको होइन नत यो देशका बासिन्दाहरुको माया नै लाग्छ तिमिहरुलाई । त्यसैसैले गर्दा तिमिहरु नेपालमा जस्ता सुकै घटना घटाउन र आतंक फैलाउन पछि पर्दैनौ । एउटा मानव रोडमा खाना लाउन नपायर भोकै नाङ्गै बाटोमा लडिरहेको बेलामा तिमिहरुको आँखामा रतन्धो लागेको हुन्छ । तर एउटा जनावर जस बाट लाभ उठाउन माथि बाटै दिएको छ तेस्लाइ काटेर खादा सरकारले मानवलाई जेल हाल्छ धन्य छ तिमी सरकार लाई ।
अति त गरी सक्या हौ अब त अत्याचार पनि त धेरै हुन थाल्यो । तिमिहरु बाट यो देशको सिङ्गो मुलबासी मंगोलहरु सिनो खाने, गाई खाने ,खोस्रने, खर्पने र पाखेहरु नै हुन त्यसैले हामिलाइ नियन्त्रणमा ल्याउन बल प्रयोग नगर । आफ्नै शरणार्थी दाजुभाइले गरेको ज्यादती र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम गर ,बाहुने सरकार । जनताले एउटा पशुको मासु खादा तिमीहरुको ध्यानाकर्षण हुन्छ तर मान्छेले मान्छे को मासु खादा तिमीहरु कुन दुलोमा सर्प जस्तै लुकेर बस्छौ ?
यद्यपि सक्छौ भने यो देशको ८०% अहिन्दु मुलबासी हरुलाइ नै जेल हालेर पालनपोषण गर । किनकी हामी सबै गाई,गोरु, भेडा ,बाख्रा , बङ्गुर, सुगुर खसी सबै चिज खाने नै छौ । यी सबै प्राणीहरु हाम्रो देशमा पाइने हुन । यि कुनै चिज युरोप काशि ककसियस बाट ल्याएर खाएका होइन ।